1954-1964 5.5 HP Johnson Seahorse Tune-UP Inqubo | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
1954-1964 5.5 HP Johnson Seahorse Tune-UP Inqubo
Imoto yale phrojekthi yi-Model CD-15 Serial 1698561.
Lokufuduka: 8.84 cu.in. = 144.8 CCM
Isisindo: 56 lbs. = 25.4 Kg
Isilinganiso Gearcase: 15: 26
Inhlansi plugs: Champion J6C gapped at .030 "(Kuyafana Lightwin)
Okokhelekayo / Oil ukuxubana: 24: 1 87 octane gas TC-W3 ukalwe uwoyela esasinenjini.
Lower uwoyela iyunithi: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis.
Isixwayiso Esitholakala Kokwenzeka Mayelana Umfutho Okokhelekayo Amathangi
Lawa ma-motors asebenzisa amathangi kaphethiloli acindezelwe. Esikhundleni sokumunca uphethiloli ethangini, ipayipi lomugqa omabili lifaka umoya ungene ethangini, liwucindezele liye ku-4-7 PSI ephoqa uphethiloli ukubuyela emotweni. Ngokuyisisekelo, la mathangi acindezelwe ayingozi yomlilo noma yokuqhuma eyingozi kakhulu. CHOFOZA LAPHA ukuze ufunde kabanzi mayelana nalezi amathangi nendlela ukuguqula nezintsha ephephile fuel amathangi.
Njengoba ngiqaqa le njini, ngihlela ukuhlanza konke engingakwenza ngendwangu nokufafaza okokuhlanza. Kunezinto eziningi zokuhlanza ezikhethekile ezitholakalayo zalokhu kepha ngimane ngisebenzisa indlu ejwayelekile ye-CLOROX Clean-UP ne-Bleach engiyitholile ngaphansi kosinki. Ngiyethemba ukuthi ngizoyibuyisa ngaphambi kokuthi umkami ayithole ukuthi ayikho. Ngihlela nokugcina lezi zingxenye zihlelekile njengoba ngizihlukanisa.
TThatha off the Motor Amakhava
CHOFOZA LAPHA ukuze uthole imininingwane.
Ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokushuna imotor yakho, ufuna ukuqinisekisa ukuthi imoto izophenduka futhi ucindezelwe ngawo womabili amasilinda. Uma imoto ingeke iphenduke ngokuguqula i-flywheel noma kubonakala sengathi ayinakho ukucindezelwa, khona-ke imoto yakho idinga okungaphezu nje kokucwaninga okulula. Kuzofanele unqume ukuthi ufuna ukulungisa kabi imoto yakho nokuthi ikhono lakho lokukhanda lizokuthatha kangakanani. Ukuzilolonga kulula. Ukukhulula ama-piston nokubuyisela ukucindezelwa kungaphezulu kobunzima obuphakathi nangaphezulu kobubanzi balesi sihloko. Angifuni ukusho ukuthi imoto ayikwazi ukulungiswa noma ayifanele ukulungiswa kodwa ngemoto engiyisebenzisela le ndatshana, akudingekile. Kwesinye isihloko, kudingeke ukuthi ngikhulule ama-piston emotweni ye-Johnson 15 HP futhi ngiyinikeze impilo entsha. Ungathola igeji yokuminyanisa esitolo sakho sezingxenye zezimoto esiseduze cishe ngama- $ 20 noma ama- $ 30. Ukucindezelwa kufanele kuhlolwe ukuthi okungenani kungamakhilogremu angama-85 noma angama-90 kepha mhlawumbe kungaphansi kwe-100 psi.
Ungahle uthande ukumiselela intambo yokuqalisa kanye / noma isibambo sezintambo zokuqala. Kungenzeka futhi ukuthi ubuyisele entwasahlobo yokubuyisa intwasahlobo uma kunesidingo. Zonke lezi zingxenye zisatholakala kepha bezingadingeki kulo msebenzi.
Susa bese ufaka okunye esikhundleni gasket ikhanda.
CHOFOZA LAPHA ukufunda mayelana izinsizakalo ikhanda isilinda.
Noma kunini lapho unemoto endala ehlala khona isikhashana, ungacabanga ukuthi i-carburetor idinga insiza. Igesi, ikakhulukazi uma ixutshwe namafutha izophendukela ku-varnish noma kungenjalo ikhiphe i-carburetor yakho. Ngenkathi kunezithasiselo eziningi zokuhlanza i-carburetor ongazifaka ethangini lakho likaphethiloli noma ufafaze ngqo ku-carburetor, ngeke zisondele ekufezeni into efanayo ne-carburetor tune-up. Noma imoto ibigcinwe ngaphandle kukaphethiloli ku-carburetor, ama-gaskets angoma futhi aqhephuke noma onakale ngokushesha uma uzama ukuyisebenzisa futhi. Ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi i-carburetor izosebenza kahle ukususa, ukuqaqa, ukuhlanza, nokuhlanganisa kabusha ngezingxenye ezintsha, ukufaka esikhundleni, nokwenza ukulungisa okuyizinyathelo zokwenza ukushuna kwe-carburetor. CHOFOZA LAPHA izithombe ezinemininingwane kanye nezinqubo kokwenza carburetor tune-lo motor.
Ngaphandle kwama-spark plugs nezintambo ze-plug, lonke uhlelo lokushisa lutholakala ngaphansi kwe-flywheel. Uhlobo lwe magneto ukuthungela kule motor kuyinto Ligcina uthi lokuphotha luzungeza Magneto nge Full Amaphuzu. Umsebenzi we uhlelo ukuthungela kuyinto ukukhiqiza ngokwanele voltage (Azungeze 20,000 volts) ukuthi angene phambili igebe use inhlansi plugs udala inhlansi futhi kwaqala ingxube fuel / emoyeni, futhi ukuze uqinisekise ukuthi voltage silethwa ipulaki inhlansi ne ncamashi ilungelo isikhathi CHOFOZA LAPHA izithombe ezinemininingwane kanye nezinqubo kokwenza ukuthungela uhlelo kutsha-up salokhu motor.
Impeller futhi Unit Lower
Kuhlale kungumqondo omuhle ukufaka indawo yempepho. I-impeller ingenye yezingxenye ezibucayi kakhulu zemoto ngoba iyahluleka, ungayishisa kalula imoto, uyihlwithe ikhanda, noma ube nezinye izinkinga ezinkulu. CHOFOZA LAPHA izithombe ezinemininingwane inqubo esikhundleni futha amanzi impeller futhi esiza iyunithi aphansi.